tsy ampy taona
Version 0.8.4 – Olombelona matihanina fandikan-teny eto
Septambra 7, 2012 amin'ny tolotra 6 Comments
Tsy matihanina ny asa
Isika dia tena mirehareha ny hanolotra izany famoahana ny plugin.
Izany dikan-, Ankoatra ny ara-dalàna sy ny bibikely enhancements fixes, farany mampiditra olona matihanina amin'ny fandikan-teny fototra fampidirana amin'ny OneHourTranslation.com matihanina fanompoana fandikan-teny.
Ny fomba miasa izany dia izao manaraka izao:
Mandehana any amin'ny OneHourTranslaion.com ary manokatra kaonty
Ampiasao ny tantara ary ataovy tsipiriany niteraka azy ireo ny toe-javatra Transposh pejy
Rehefa mampiasa interface tsara ny fandikan-teny, ny Admin (ary iray ihany Admin) dia hahita ny “Ora iray Translation filaharana” bokotra
Ny fanindriana bokotra ity dia hanampy ny andian-teny ny filaharana, tsindry bokotra iray hafa dia dequeue ilay zavatra
10 minitra taorian'ny fehezan-teny farany dia nanampy ny tetikasa fandikan-teny ho amin'ny iray ora niteraka fandikan-teny
Omeo azy ny ora iray (na latsaka avy amin'ny traikefa) ary ny fandikan-teny ho hita ao amin'ny ny toerana
Faly ny rehetra ary raha ny marina tetikasa manohana ny Transposh (Summer!)
Fa ity no vaovao, ka raha mamely Murphy, mifandraisa aminay fotsiny ary manao na inona na inona Ho afaka mba manao zavatra miasa.
Ankehitriny, Fa ny sisa famoahana ity:
Raikitra sainan'ny Swahili ho Tanzania araka ny hitantsika amin'ny Ed Jordana
Maro ny fixes amin'ny fanompoana nomaniny ho solon'izay
Amboary ho parser bibikely, rehefa manana fandikan-teny amin'ny fiteny Default taorian'ny singa voafantina
Raikitra XSS notaterin'ny Infern0_ (fisaorana lehibe!)
Fa programmers: Koa ny asa maneran-tany mba hiverina ny fiteny ankehitriny “transposh_get_current_language()“
Toa toy ny Lybia manana sainam-pirenena vaovao koa 😉
Raikitra filatro ID misy ny backslash mba handeha Ho W3C Validation
Nohavaozina jQueryUI 1.8.23 mba tsy mifanohitra amin'ny jQuery 1.8 ampiasain'ny sasany lohahevitra
Portogey (Brezila) teny amin'ny Amilton Junior
Ny mpandraharaha dia miandry ny fanamarihana, raha toa ianao mametraka ny be atao famantarana, miezaka nifandray antsika indray!
P.S. Izany no voalohany dikan mba izay no lasa 1,000 download isan'andro, isika nanetry tena.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: sainam-pirenena, tsy ampy taona, matihanina fandikan-teny, fanafahana, securityfix
Version 0.8.3 – Ny shortcode ny anaty filatron-dahatsoratra
Mey 30, 2012 amin'ny tolotra 11 Comments
Izany dikan-fixes Bibikely sy manampy ny sasany fanohanana mahafinaritra shortcode ary mamela anao hametraka ny anaty filatron-dahatsoratra ao amin'ny lahatsoratra
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: tsy ampy taona, fanafahana, shortcode
Version 0.8.2 – 3 taona, 66 fiteny, 1 WordPress
Martsa 6, 2012 amin'ny tolotra 21 Comments
Hoy aho hoe 3 labozia tamin'io mofomamy!
Efa telo taona (ary ny telo andro, ary telo-polo telo ora) hatramin'ny voalohany dikan-Transposh plugin dia nalefa tamin'ny plugin ny wordpress.org repository.
Time Azo antoka fa manidina.
Izany no dingana voalohany taona (29faha Febroary) ary iray taona ho an'ny dingana tena Transposh. Ny plugin dia alaina avy amin'ny repository ny 50,000 fotoana tamin'ity taona ity ary nanao fitomboana ny lafin-javatra tsy tapaka sy ny isan'ny fiteny nanohana. Ary ankehitriny ny koa ny Hmong Daw isika plugin voalohany mba hanohanana ny isan'ny 66 fiteny.
Izany dia tena mahaliana (toy ny ao amin'ny, manana fiainana mahaliana) taona ho an'ny fandikan-teny mandeha ho azy ny indostria sy ny Plugins, izay Google dia efa ho nandatsaka ny API fanohanana (mifamadika izy ihany ny karama modely) Bing raha nametraka fetra vaovao. Tamim-pahombiazana Transposh naharesy ireo fanovana, raha Plugins hafa tsy velona.
Inona no tahirizin'ny hoavy ho an'ny Transposh? Isika tsikelikely ny nahandro zavatra vaovao, miasa amin'ny fahitana mba hanatsarana ny vohikala fandikan-teny, raha zavatra ho vonona – dia ho avy. Mandritra izany fotoana izany, ny mbola zava-dehibe ny fanohanana ny antsika, indraindray amin'ny mailaka tsotra “ny plugin lehibe” mahatonga antsika hanohy. Koa raha mino ianao, dia manao tsara isika, Mitete antsika ny tsipika, raha mihevitra fa tokony hanatsara ny zava-, Mitete antsika taratasy kely, ary raha ny hevitrao fa ny mampinono, dia tsy hoe nahoana ianao mamaky ity hafatra ity hatramin'ny teboka io 😉
Ta-tena lehibe faha-4 taona, angamba izany dia hiafara miaraka amin'ny mofomamy lehibe kokoa 🙂
Nametraka Under: General Messages, Release filazana, Software Updates Tagged Miaraka: Bing (MSN) mpandika teny, andro nahaterahan'i, tsy ampy taona, fiteny maro, fanafahana, WordPress plugin
Version 0.8.1 – Tsy misy bibikely! izany ny endri-javatra!
Desambra 12, 2011 amin'ny tolotra 46 Comments
Bibikely fihazana efa mandroso ny teknolojia
Amin'ny Transposh ny avonavona tenantsika isika eo amin'ny Coding ambony fitsipika, Midika izany fa tsy misy Bibikely ao amin'ny rindrambaiko. Eny, efa nandre izany zo, aotra Bibikely hita. Na izany aza – Misy olana kely, hafa ny olona tsy tia antsika ary tena manana ny Fitsipi-dalàna mifehy Bibikely. Koa raha nametraka Transposh sy ny zavatra tsy miasa tsara, misy angamba ny bibikely ao amin'ny WordPress, na ny bibikely ao amin'ny foto-kevitra ianao anao mampiasa, na ny mifanohitra amin'ny iray hafa plugin, na jQuery nanao misy mikorontana, na ianao mbola mampiasa Internet Explorer 2 na izany zavatra mifandray amin'ny ny reninao, na ny reniny, na ny renibeny, na ny sela voalohany izay mbola noforonina. Tsy hisy mihitsy izany isika! mandrakizay na oviana na oviana!
Raha toa ka misy zavatra tsy miasa sy ianao tatitra izany ho antsika, isika mahita olon-kafa avy hatrany ny manome tsiny, ary indraindray, raha amin'ny falifaly, isika, raha ny marina code zavatra tsy ireo olona hafa Bibikely.
Izany fanafahana dia iray amin'ireo fisaorana, ny endri-javatra vaovao ihany dia ny fahafahana mametraka fanehoan-kevitra teny amin'ny interface tsara ny fitantanana (raha misy olona nandefa amin'ny teny Espaniola raha variana raha ny marina ny toerana amin'ny teny Anglisy na lefitra andininy) .
Ny sisa fanafahana io no:
Fandikan-teny mivantana hahafahan'ny olombelona nomaniny ho solon'izay nosoratanao
Tohano ny ， famantarana amin'ny parsing (Ny tsy Comma, tena!)
Reintroduce CORS fanampiana ao amin'ny AJAX (Cross Origin Ajax)
Miezaha mba hahazoana antoka lazyloader entana ao amin'ny marina manodidina
Manamboatra ny kajy ny fandikan-teny batch habe mba tsy fandikan-teny malalaka loatra ny Google
Amboary rehefa jQueryUI roa dikan-dia tafiditra, indrindra ny WordPress 3.2.x
Raikitra Widget mba hanesorana [Language] izay voatiry araka ny hitantsika amin'ny Philip Trauring
Manamboatra toerana ho an'ny mpampiasa tapaka amin'ny fampiasana mivantana ny asa anaty filatron-dahatsoratra
Manantena izahay fa hahazo izany ianao dikan-
Nametraka Under: Release filazana, Software Updates Tagged Miaraka: bugfix, tsy ampy taona, fanafahana
Version 0.7.6 – Foana Rolling
Aogositra 3, 2011 amin'ny tolotra 43 Comments
Fitandremana amin'ny Rolling
Faly izahay manolotra anareo ny vaovao rehetra amin'ny WordPress plugin fanafahana. Izany dia mikodiadia famoahana izay tsy ahitana na inona na inona fiovana lehibe, na zavatra izay koa fangadiana. Noho izany dia mandeha ny faribolana fotsiny ny changelog ary hazavao ny vaovao.
Efa nafarana fanatsarana ny sasany ho an'ny kely saina Dom HTML izay manompo ho toy ny fototra ny parser amin'ny famoahana manokana eo ambony vaovao, tsy vaovao be eto
Avelao fametrahana ny lahatsoratra / pejy fiteny amin'ny boaty Select tsotra. Tsy endri-javatra vaovao, tahaka ny mety efa nisy olana tany aloha tany aho nanampy ny tp_language Meta ny Lahatsoratra tanana, na izany aza izany no hanatsorana ny dingana, ary izany koa dia ho azo antoka fa nandika Default teny dia nihodina ka ny endri-javatra dia tena miasa.
Mampitandrina momba ny toe-piainana sasany fa tsy afaka manamboatra sy ny mpampiasa dia tokony mety ho fantatry ny. Amin'izao fotoana izao dia misy toe-javatra roa isika hampahafantatra momba ny, izay dia ireo izay nahatonga ny ankamaroan'ny fanontaniana ny fanohanantsika ny daty. Voalohany dia mampitandrina momba ny toe-piainana ambany tsianjery, ary mampirisika ny olona mba hampitombo ny php fitadidiana fetra (na Avadiho ho mendrika ny fanompoana fampiatranoana). Ny faharoa dia ny fampitandremana ny tsy fisian'ny APC na mitovy izay mety hanatsarana ny fampisehoana be (indray, Avadiho ho tsara kokoa fampiatranoana!). Ny fampitandremana dia azo soa aman-tsara amin'ny alalan'ny maika nesorina ny kely sy ny mariky X lafiny izay dia ho azo antoka fa ho tsy hahita ireo fampitandremana ho ela.
Avelao fanangonana ny anonymized statisics amin'ny faneken'ny mpampiasa. Azafady azafady mamela antsika mba hanangona antontan-kevitra sasany! tena te zava-poana sasany isika antontan'isa toy ny mihazakazaka amin'ny 1 zillion toerana ary mandika ny gazillion pejy isan-tsegondra!
Raikitra ny sasany hahita ilay fampitandremana kely notaterin'ny mpampiasa. Tsy dia ny hazo ho lalan-rehefa avy nanala ny dokam-barotra!
Efa nohavaozina ihany koa ny FAQ pejy, mety ho afaka amin'ireo zavatra sasany mamerina fanontaniana, na dia Ho afaka hilaza mpampiasa hamaky ny FAQs izany…
Koa – dia mora kokoa noho ny hatramin'izay ankehitriny ny maneho ny mandrakizay fanohanana ny tetikasa ity amin'ny alalan'ny fampiasana ny fiaraha-monina amin'ny lafiny bokotra, tsy lafo anao na inona na inona (mety afa-tsy very ny namana rehetra, ny laza sy ny voninahitra ao amin'ny Facebook) ka ataovy fotsiny!
Manantena izahay fa hahazo izany dikan-, ary niriko (toy ny foana) Ho faly ny mamaky ny soso-kevitrao.
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: 0.7, tsy ampy taona, fanafahana